Sunaulo Nepal | तुलसीपुर अनलाइन रोधीघरले “अनलाइन लोकदोहोरी प्रतियोगिता” गर्दै ! तुलसीपुर अनलाइन रोधीघरले “अनलाइन लोकदोहोरी प्रतियोगिता” गर्दै ! – Sunaulo Nepal
तुलसीपुर अनलाइन रोधीघरले “अनलाइन लोकदोहोरी प्रतियोगिता” गर्दै !
आधुनिक प्रविधिको यो युगले संसारलाई मुठ्ठीभर कैद गरेर राखेको छ । बर्तमान बिश्व युगमा सबैको हातहातमा रहेको प्रविधि मध्यको एक फेसबुक पनि हो । फेसबुकलाई सामूहिक उपयोग गर्दै मानिसहरु सामाजिक कार्यका लागी अत्यन्त नौलो प्रयोग गर्दै आइरहेको भेटाउ छौ ।
त्यस्तै सामाजिक संजाल फेसबुकलाई नौलो प्रयोग गर्दै “कला र गलाको सम्मान हाम्रो अभियान” मूल नाराका साथ् तुलसीपुर अनलाइन रोधीघरले फेसबुक ग्रुप एडमिन (मेसेन्जर) संचालन गर्दै आइरहेको छ, उक्त रोधीघर एडमिन अनलाइनमा विश्वभर रहेका नेपालीहरु जोडिएर फेसबुक मेसेन्जरमै अनलाइन एडमिन प्रतियोगिताको आयोजना समेत गरेको छ ।
खुल्लमखुल्ला लोक दोहोरी प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन सम्पूर्ण लोकदोहोरी एडमिनहरुलाई अनुरोध गर्दै नगत पुरस्कारको ब्यबस्था पनि गरेको छ । अनलाइन मार्फत हुने प्रतियोगिता यहि २०७३ माघ २८ गते देखि सुरुवात हुनेछ । लोक दोहोरि प्रतियोगिता नेपाली समय अनुसार बेलुकी ७ बजे देखि राति ११:५५ बजेसम्म हुने प्रतियोगिताका बरिष्ठ आयोजक देव राज ओलीले बताउनु भएको छ ।
प्रतियोगितामा भागलिन टिम दर्ताको अन्तिम मिति २०७३ माघ २५ गते बेलुकी १२ बजे सम्म रहेको छ । प्रतियोगितामा भागलिने गायक गायिकाहरु तुलसीपुर रोधीघरको आयोजकको नियम परिधिभित्र रहेर भागलिनु पर्ने जनाएको छ।
प्रतियोगिताको नगत प्रथम पुरस्कार १२०००, दोस्रो पुरस्कार ८०००, तेस्रो पुरस्कार ५०००, साथै अन्य थुप्रै पुरस्कारहरुको ब्यबस्था गरेको छ । अनलाइन प्रतियोगिता बारे सम्पूर्ण जानकारी लिन तुलसीपुर अनलाइन रोधीघरले सार्बजनिक गरेको भिडियो हेर्न सक्नु हुनेछ ।
सम्पूर्ण जानकारीको लागि यो भिडियो हेर्नुहोला
९ माघ २०७३, आईतवार १०:०९ मा प्रकाशित